Fandaharana Marketing Affiliate - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
Fandaharam-barotra marketing Ecubmaker
Ankamaminay ny mety hisian'ny fiaraha-miasa
Raha manana kaonty media sosialy ianao
miaraka amin'ny mpanaraka marobe avy amin'ny:
Raha iray amin'ireto famantarana ireto ianao:
· Mpanonta iray avy amin'ny tranonkala
· Admin na mpanelanelana amin'ny forum
· Fihinanam-bilona avy amin'ny orinasam-barotra
Mahazoa komisiona hatramin'ny 8% isaky ny mahomby
Mahazoa hatramin'ny 8% amin'ny kaomisiona amin'ny referraly mahomby. Mahazo komisiona amin'ny fividianana rehetra mendrika, fa tsy ny vokatra nataonao ihany. Fanampin'izany, ny tahan'ny fiovam-po mifaninana dia manampy anao hampitombo ny vola azonao. Raha manana fanontaniana ianao dia mifandraisa aminay:market05@zd3dp.com .
Raha mpandinika youtube ianao miaraka amin'ireo mpankafy youtube maherin'ny 100k
Vonona izahay hanome anao santionany maimaimpoana ho an'ilay fitsapana. Azonao atao ny manombatombana amin'ny hevitrao sy ny tetikasanao ary manaova izany amin'ny Internet. Mba hahazoana ny vokatra dia mifandraisa aminay:market05@zd3dp.com .
andao hanomboka amin'ny programa marketing marketing afubmaker
Ny programa Affiliate dia manampy ny mpamorona atiny, ny mpanonta ary ny bilaogera hanangona vola ny fivezivezeny. Azonao atao ny mampiasa fitaovana fananganana rohy mora hitarika ny mpihaino anao hanoro hevitra anao, ary hahazo vola amin'ny fividianana sy programa mendrika.
Midira amin'ny mpamorona, mpanonta ary bilaogy-
gers izay mahazo amin'ny ecub-
Mizarà vokatra amin'ny mpihaino anao.
Izahay dia namboarina fitaovana-
als ho anao.
Mahazo hatramin'ny 8% amin'ny mpiara-miasa-
iraka avy amin'ny fividianana mendrika
Tsindrio eto raha hiaraka aminay
Torolàlana ho an'ny firaketana